Sida loo isticmaalo 3D Touch menus ee iPadOS | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | | Casharrada iyo buugaagta
Xanta ku saabsan burburka nidaamka 3D Touch iPhone-ka ayay ku sii xoogaysanayaan. Tani waxay ka dhigan tahay inaan macasalaameyn karno tikniyoolajiyad aanu Apple garanaynin sida looga faa'iideysto laga bilaabo xilliga ugu horeeya laakiin malaayiin isticmaaleyaal ah ay u ooman doonaan. Si kastaba ha noqotee, beddelka 3D Touch ayaa horeyba looga arki karaa macruufka 13 iyo iPadOS betas. Ujeedadu waa mid fudud: ku fur menus ficil deg deg ah adoo riixaya waqti dheer. Tani, in kasta oo ay u muuqan karto xoogaa wareer ah, ayaa loogu talagalay inay noqoto farsamo lagu dedejinayo isticmaalka nidaamyadan hawlgalka. Boodka kadib waxaan ku tusi doonaa.
iPadOS iyo iOS 13 waxay muujinayaan macsalaameynta 3D Touch
In kasta oo iOS 13 ay wali leedahay taageerada 3D Touch ee aaladaha qaarkood sida iPhone 6S iyo 6S Plus, haddana waa inaan sugno tiknoolajiyadeeda kale ee loo yaqaan Haptic Touch u gaaraan dhammaan qalabka si la mid ah sidii ay ku sameeyeen iPhone XR. Teknolojiyada Haptic Touch waxay la mid tahay 3D Touch marka laga reebo hal digniin: waxa la cabiraa waa waqtiga aan ku cadaadinno shaashadda mana aha cadaadiska la saaray sida 3D Touch uu sameeyo. Tiknoolajiyaddan ayaa fure u ah fahamka cusub iPadOS Liiska Waxqabadka Degdegga ah.
Labadan tiknoolajiyadood midkoodna waligiis kuma uusan jirin iPad-ka, sidaa darteed liis garaynta liistadaani waxay horumar u tahay dadka isticmaala aaladdan. Haddii aad iPadOS ku rakibtay sidii beta guud oo ka mid ah iPad-kaaga riix dhowr ilbiriqsi isla markiiba sii daa. Haddii aan la sii deynin, astaamaha codsigu waxay bilaabi doonaan inay ruxmaan waxaanan dhaqaajin doonnaa habka wax ka beddelka, innagoo awood u leh inaan tirtirno ama u dhaqaajino codsiyada hareeraha dusha. Waxyaabaha lagu soo bandhigay meerisyadan dhaqso badan Waxay la mid yihiin kuwa aan ku haysanno iPhone-ka oo leh 3D Touch on qalabka taageeray.
Haddii aysan jirin wax shaqo ah oo la heli karo, ficil la yiraahdo «Share application» ayaa soo muuqan doona. Laakiin xaaladaha sida kuwa qaar ka mid ah codsiyada hooyo iyo barnaamijyo kale oo badan, waxay muujinayaan ficillo kale sida furitaanka dukumiintiyada si toos ah ama daaqado cusub oo leh waxyaabo kale. Waqti ka dib, horumariyayaashu waxay ogaan doonaan muhiimada dalabka waxay leeyihiin tuulmayaal si dhakhso leh wax looga helo si looga fogaado inaad u tagto raadinta hawl si fiican ugu jiri lahayd menuskan cusub ee iPadOS.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo isticmaalo 3D Touch menus-ka iPadOS